ओबामा र क्यास्ट्रोबीच मानवअधिकारबारे विवाद - BBC News नेपाली
ओबामा र क्यास्ट्रोबीच मानवअधिकारबारे विवाद
क्युबा भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा र उनका क्युबाली समकक्षी राउल क्यास्ट्रोबीच एउटा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मानवअधिकारको विषयलाई लिएर वादविवाद भएको छ।
त्यसका बावजुद उनीहरुले दुई देशलाई नयाँ बाटोतर्फ लैजानका निम्ति सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
रेभोलुसन स्क्वायरमा अमेरिकी राष्ट्रिय गान बज्नु एउटा ऐतिहासिक दिन रह्यो जहाँ कुनैबेला फिडेल क्यास्ट्रोले अमेरिकी विस्तारवादविरुद्ध भाषण गरेका थिए।
ओबामाको भ्रमणका क्रममा शीतयुद्धका यी दुई पूर्व शत्रु राष्ट्रबीचको सम्बन्धको एउटा नयाँ दिनका विविध तस्वीरहरु देखिए।
मलाई राजनीतिक बन्दीहरुको सूची दिनुस् उनीहरुलाई म रिहा गरिदिन्छु, कुन राजनीतिक बन्दी? एउटा नाम वा जति छन् ती सबै दिनुस्, उनीहरुको नामसहितको सूची दिनुस्, यदि हामीसँग छन् भने आजै राति उनीहरुलाई रिहा गरिनेछ
राउल क्यास्टो, राष्ट्रपति, क्युबा
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ दुई मुलुकबीच अझै गहिरो मतभेद रहेको पर्याप्त प्रमाणहरु देखा परे।
क्युबाली राष्ट्रपति क्यास्ट्रोले आफ्ना अथिति ओबामालाई मानवअधिकारदेखि लिएर आर्थिक प्रतिबन्धका विषय स्मरण गराए।
पत्रकारहरुको प्रश्नको सामना गर्ने सन्दर्भमा अभ्यस्त नदेखिएका क्यास्ट्रो राजनीतिक बन्दीबारेको सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासामा रिसाए।
उनले भने, “मलाई राजनीतिक बन्दीहरुको सूची दिनुस् उनीहरुलाई म रिहा गरिदिन्छु, कुन राजनीतिक बन्दी? एउटा नाम वा जति छन् ती सबै दिनुस्, उनीहरुको नामसहितको सूची दिनुस्, यदि हामीसँग छन् भने आजै राति उनीहरुलाई रिहा गरिनेछ।”
अमेरिकाले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाउँदै क्यास्ट्रोले उसले पनि मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने गरेको बताए।
आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने विषय कंग्रेसमा निर्भर गर्नेछ, हामीले मानवअधिकारका विषयमा कति छिटो छलफल गर्न सक्छौँ र सेतु निर्माण गर्न सक्छौँ त्यसमा त्यो विषय निर्भर गर्नेछ
बराक ओबामा, राष्ट्रपति, अमेरिका
ओबामाले इतिहासमा क्युबाली कम्युनिष्ट सरकारलाई उल्ट्याउने अमेरिकी प्रयासप्रति क्युबाको आक्रोश स्वभाविक भएको भन्दै अब त्यो अतीत भइसकेको उल्लेख गरे।
उनले भने, “आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने विषय कंग्रेसमा निर्भर गर्नेछ, हामीले मानवअधिकारका विषयमा कति छिटो छलफल गर्न सक्छौँ र सेतु निर्माण गर्न सक्छौँ त्यसमा त्यो विषय निर्भर गर्नेछ।”
ओबामाको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न व्यापारिक सम्झौताहरु भएका छन्।
क्युबाली सरकारसँग सम्झौता गर्ने बुकिङ डट कम पहिलो अमेरिकी अनलाइन ट्राभल एजेन्सी बनेको छ जसअनुसार ट्राभल एजेन्सीसम्म नपुगेरै अमेरिकी पर्यटकहरुले कोठा बुकिङ गर्न पाउनेछन्।
त्यसैगरी गुगलले क्युबाका प्रसिद्ध कलाकारहरुको एउटा स्टुडियोमा प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्नेछ जहाँबाट एकैपटक ४० जनाले निःशुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्न पाउनेछन्।